အတိုင်ပင်ခံ အမှုကို အမိန့်ချဖို့ စစ်ကောင်စီ ဘာကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာလဲ ? – Myanmar Media
အတိုင်ပင်ခံ အမှုကို အမိန့်ချဖို့ စစ်ကောင်စီ ဘာကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာလဲ ?
အတိုင်ပင်ခံ အမှုကို အမိန့်ချဖို့ စစ်ကောင်စီ ဘာကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာလဲ?
ရာထူးကနေ ဖယ်ရှားခံထားရတဲ့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ နေပြည်တော် မြို့တော်ဝန် ဦးမျိုးအောင်တို့ကိုလည်း ကိုဗစ်နိုင်တင်း ကန့်သတ်ချက်တွေကို ဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲခံထားရတာပါ ။
သို့ပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွပ်စွဲထားတဲ့ အမှု့တွေဟာ နိုင်ငံတကာဥပဒေမှာတော့ အာမခံချက် ရနိုင်တဲ့ အမှု့တွေပါလို့ ကျွမ်ူကျင်သူတွေက သုံးသပ်ထားပါတယ် ။
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးဌာနက အာရှရေးရာ ဌာနခွဲက လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ Phill Robertson ကတော့ ” စွပ်စွဲထားတဲ့ အမှု့တွေဟာ သိပ်ပြီး ကြီးကျယ်တာတွေ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဥပဒေအတိုင်းဆိုရင် လွှတ်ပေးရမှာပါ ။
သို့ပေမယ့် မြန်မာတရားရုံးတွေကို စစ်တပ်က ကြိုးကိုင်ထားတဲ့အတွက် အပြစ်ရှိတယ်လို့ အမိန့်ချနိုင်ပါတယ် ။ အတုအယောင် စွပ်စွဲမှု့တွေပါ ။ ဒါဟာ နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်မှု့ပါ ။ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး ”